I-10 Best Vacuum Cleaners I-Robot Yokuthenga (Izindleko / Inzuzo)
Ngakho ufuna ukunamathela kumfashini futhi uthenge i-robot yokuhlanza i-vacuum.
Ngiyazi ukuthi akulula ...
Yenza umsebenzi we-8 / 12h nsuku zonke futhi ufike ekhaya futhi kufanele wenze imisebenzi yasendlini ...
Kodwa uma ngikwazi sindisa isikhathi?
Imagine isimo esilandelayo ...
Izinkulungwane zamahora zilondolozwe ekuhlanjululeni, yenza lezi zinto ezibusayo!
Ingabe ikuthakazelisa? Manje sekuyisikhathi sokwazi i-7 I-robot yokuhlanza i-robot engcono kakhulu yokuthenga!
I-Xiaomi I-Aspirator Yami I-Robot 2ºGen
Amandla okuphumelela: 9.4
Igama logama: 9.5
A isizukulwane sesibili i-robot's vacuum cleaner Xiaomi ulapha "ukuhlanza" umncintiswano!
Kuyathakazelisa njengoba brand ukubheja eqinile futhi kule ndawo.
I-robot yethu yokuhlakanipha yokuhlanza encane inezinzwa eziningi njengoba "umfowethu" omdala.
Inzwa enkulu yiyona I-Laser okuyinto ikuvumela ukuba ubalazwe / uhlole yonke indawo eseduzane.
Inzwa ibizwa ngokuthi (LDS) - I-Laser Distance.
Ngomshini wobuchwepheshe we-Xiaomi, lawa maphepha e-laser I-360 degrees, lokhu kwenzeka ngezikhathi ze-1800 ngomzuzwana, akukho ndawo i-LDS engayenza (ngaphandle uma kuyisithiyo kumbhobhothi).
Ukufeza lo mgomo omkhulu, i-Robot inamaprosesa amathathu abala ukunyakaza, konke ngesikhathi sangempela.
Ngemuva kwemephu, i-algorithm (SLAM), ephethe kakhulu ukuhlanzwa okuphumelelayo.
Kulabo abafuna ukuba isinyathelo esisodwa ngaphambili, ungasebenzisa aplicação i-Xiaomi esemthethweni "MiHome", Ngakho-ke ulawule ngokuzenzakalelayo i-robot vacuum cleaner, hlola amahora wokusebenza, cisha / uqhubeke futhi ubone ukusetshenziswa kwezihlungi.
I-Xiaomi Sensors I-Aspirator Yami I-Robot 2ºGen:
Isilawuli sebala Laser
I-Ultrasonic Radar Sensor
Isilaleli Sokushesha Kwama Fan
Ikwazi ukukwenza ukuhlanzwa okukude (ukude ukusuka ku-10mm) ngenxa yayo inzwa yodonga futhi ngokunembile kunenguqulo yokuqala.
I-aspirator ye-robot ihlanganisa a ukulayisha isiteshi , uma ifinyelela ku-20%, i-Aspirator yeRobot iphinde ibuyele ku-80%, bese uqedela umsebenzi wokuhlanza.
I-Nidec i-brushless DC motor iqinisekisa ukucindezelwa komoya kwe-2000pa, ngempela esabekayo.
Ibhulashi elikhulu lilungisa ngokuzenzakalelayo ukuphakama ukuqinisekisa ukuhlanza ezindaweni ezingalingani.
Esinye isici esibaluleke kakhulu ukuthi ungasebenzisa "i-mopping"Ukwenza indlu ihlanzeke.
Lokhu kusho ukuthi ingasetshenziswa njengokwomile owomile noma omanzi futhi udlule ezindaweni lapho sifuna khona ukuba ihlanzeke nakakhulu.
Ezingeni lebhethri linamandla 5.200 mah okuzohlinzeka nge-2,5h yokusebenza okuqhubekayo ngokukhokhwa okuphelele.
Imininingwane Eyinhloko Ye-Robot Vacuum Cleaner:
Amandla okuphumelela: 2000pa
Vumela Ukuhlanza Isisindo: 3,5 KG
Ubukhulu: 35 cm x 35 cm x 10 cm
Umsindo: 65 DB
Phinda ulayishe ngokuzenzakalela: Yebo
Isikhathi sokusebenza: 2,5h
Ibhethri: 5.200 mAh
Ama-Vacuum Robot amahle kakhulu wokuthenga
I-Xiaomi I-Robot Yami Yokuhlanza I-Robot
Amandla okuphumelela: 9.2
Lokhu kwakuyi-first robot vacuum cleaner ezoqaliswa ngu-Xiaomi.
Lokhu njengenguqulo yesibili i-robot ehlakaniphile, lokhu ngosizo Izinzwa ze-12.
Enye yezinzwa eziyinhloko yiLaser, ebizwa nge-LDS, njengenguqulo yesibili.
Lolu buchwepheshe buzovumela ukufaka imephu ku I-360 degreesfuthi uyakwenza Izikhathi ze-1800 ngomzuzwana, njengenguqulo yesibili.
Njengenguqulo yamuva kakhulu umuntu angayisebenzisa aplicação i-Xiaomi esemthethweni "MiHome", Ukusebenzisa i-robot vacuum cleaner ukude.
I-Xiaomi Izinzwa I-Aspirator Yami I-Robot:
Usenayo inzwa yodonga ukuze ukwazi ukuhlanza imiphetho
Uma ufinyelela 20% i-vacuum cleaner izokwenza umzila kuze kube khona isisekelo sokufaka kabusha.
Amandla okuzondla anamandla kakhulu angeke akuvumele ukuthi ubukeke kabi ekuhlanzeni indlu.
A ibhetri iyinhloko eqinile kakhulu yale divayisi ekwazi ukumelana kuze kube 2.5h.
Imininingwane Eyinhloko Ye-Robot Vacuum Cleaner
Amandla okuphumelela: 1800pa
Vumela Ukuhlanza Isisindo: 3,8 KG
Ubukhulu: 38 cm x 33 cm x 8 cm
Umsindo: 64 DB
I-Xiaomi Xiaowa I-Aspirator Robot
Amandla okuphumelela: 8.9
Xiaomi Xiaowa ungomunye wabahlanzi abavundile kakhulu ku- ikhwalithi / intengo.
Lokhu kuhlanza i-robot vacuum yiyona eshibhile I-3 futhi iqinisekisa ukuthi kuyithenga elihle lula ukuthi ungaletha.
O amandla okulanda ivela ku-1600pa, okuzoqinisekisa ukuthi uncelisa uthuli noma ukungcola ekhaya lakho.
Lokhu kunakho Izindlela zokuhlanza ze-9 ukujabulela.
Idivayisi inenani Izinzwa ze-10, ukugwema izithiyo noma ngisho nokugwema ukuwa uma kwenzeka izitebhisi noma ngisho nebhokisi.
Into ethakazelisayo yukuthi ungakwazi ukuhlukanisa ibhola kusukela phansi njengenguqulo ethuthukisiwe kakhulu yomkhiqizo.
O ukulahlwa kwemfucuza i-640 ml, emikhulu kunamanye amamodeli amabili we-Xiaomi.
Ibhethri ngu-2.600 mAh kodwa usenayo Ukuzimela kwamahora we-2, okuyinto ehlaba umxhwele ngempela.
Uma sifinyelela ebhetri i-30% izoqala ukuya esiteshini sokushaja.
Kufanele kuphawulwe ukuthi yilokho okwenza kancane umsindo kulaba abathathu.
Um ihlanzekile i-robot vacuum cleaner futhi nge intengo engabizi kakhulu kunezibonelo ezinamandla kunazo zonke ze-Xiaomi.
Amandla okuphumelela: 1600pa
Ubukhulu: 35 cm x 35 cm x 9 cm
Umsindo: 60 DB
Isikhathi sokusebenza: 2h
Ibhethri: 2.600 mAh
I-V5S I-PRO Aspirator Robot
Amandla okuphumelela: 6.8
Igama logama: 7.4
Ezinye zezinto ezihamba phambili emakethe, lokhu kuhlanzekile kwe-robot vacuum cleaner kuzokumangaza ngezindlela eziningi, i I-ILIFE V5S Pro Ihlakaniphile ukulwa nokushayisana , kubalulekile kunoma ubani ofuna ukuvikela ifenisha yakhe kuzo zonke izindleko.
Wakho amandla okulanda ivela ku-850 pa, uthuli nama-debris azothathwa kalula yilo robot encane.
Okuhle kakhulu kusasele!
Usekela Izindlela zokuhlanza ze-2 , owomile futhi omanzi (ukuxubha), impilo yakho iyoba lula kakhulu.
UKUKHONA: I-tank 300 ml.
Le nsiza encane yokuhlanza i-smart vacuum ingahle ihlelwe ngezikhathi ezithile, ukhetha amahora afisa futhi i-robot isebenza kuphela kulezi zikhathi ezikhethekile.
Enye into ekumangazayo ILIFE V5S PRO kungumsindo wakho! Ihamba nxazonke ze-50 Decibels, eyenza yona kakhulu kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye izipesheli emakethe.
Ukuhlanza, isekela izindlela eziningana:
- Ukuhlanza okuzenzakalelayo
- Indawo yokuhlanza ngokuqondile
- Ukuhlanzwa okuhleliwe
O I-ILIFE V5S Pro inehlanzi lokuhlanza phakathi kwe-150 amamitha ayisithupha kuya ku-180 amamitha square.
Ngemuva kokuhlanza, i-vacuum cleaner ehlakaniphile ushona kuphela esiteshini sokushaja.
Ukukhetha okuhle kulabo abafuna ezinye zezihlungi zokuhlanza i-robot izindleko zezindleko.
Amandla okuphumelela: 850pa
Vumela Ukuhlanza Isisindo: 2,0 KG
Ubukhulu: 38 cm x 33 cm x 7 cm
Umsindo: 50 DB
Isikhathi sokusebenza: imizuzu ye-150
Ibhethri: 2.500 mAh
I-ILIFE A6 i-Aspirator Robot
Amandla okuphumelela: 7.2
O ILIFE A6 ungomunye wabahlanza abanamandla kakhulu kulo mshini, kulokho okuvelele kakhulu lokhu kuhlanza okuhlanzekile okuyi-smart power of 1000 pa, futhi isethi entsha yama-brushes okwenzelwe ubuchwepheshe bayo obusha Isiphepho Samandla, lapho iqukethe ukuthuthumela, ukuxubha nokuncelisa ngenqubo yezinyathelo ze-3.
Amanye ama-determinants ku ILIFE A6 kufanele ube nebhethri ye-2.500 mAh, ezokuvumela ukuthi usebenze imizuzu ye-160 ngokuqhubekayo (ukugcwele okugcwele kuthatha ngaphansi kwamahora we-3).
Lapho ibhethri iphelile, i-robot ehlanzekile yokuhlanza i-robot ILIFE A6 ubuyele esitokisini sokushaja yedwa.
I-robot nayo iyinkimbinkimbi kakhulu, okwenza kube lula ukuhlanza ngaphansi kwefenisha futhi inzwa yesithiyo ngeke isishiye nganoma iyiphi indlela.
Ungakwazi futhi ukukhuphuka izithiyo, uma nje engadluli i-15º futhi ungakhathazeki ngezitebhisi zendlu yakho, i ILIFE A6 unenzwa yokulwa nokuwa.
Noma ubani obuka i-robot uyothola kuhle kakhulu, kusemnyama ingilazi enomsindo ngenhla.
Ungakwazi futhi ukulawula i-robot nge umyalo ukuhlela ukuhlanza noma ukulungisa kabusha umzila.
I-robot ehlakaniphile enegunya elikhulu kakhulu lokuncelisa.
Amandla okuphumelela: 1000pa
Vumela Ukuhlanza Isisindo: 2,5 KG
Isikhathi sokusebenza: imizuzu ye-160
I-ILIFE V7S Plus I-Aspirator Robot
Amandla okuphumelela: 4.7
O ILIFE V7S isifanekiso sokubheka.
Kuyisibonelo esingaqondanga nje kuphela ukufisa kepha nokukwazi ukukwenza "i-mopa"Ngokufaka ngesandla esikhundleni salo nangokubeka amanzi ku-tank 300 ml.
Uma ukhathazekile ukuthi uzochichima emanzini, ungakhathazeki ngakho, ngoba le divayisi inayo ubuchwepheshe be-i-drop ngakho uma usebenzisa amanzi uma ungasisebenzisi kabusha endaweni efanayo.
O V7S unayo Izindlela zokuhlanza ze-4 ongayisebenzisa, vele ukhethe okufanele kakhulu izidingo zakho.
Njengabahlanzi abaningi abavaliwe, izinzwa ukuvimbela iwela ezitebhisini noma emabhaleni.
Amandla okusondeza avela ku-400pa, ibonisa ukuthi ingaba negunya elincane, kodwa akenzi lutho olubi ngomsebenzi wakho.
Ibhethri liyi 2.600 mah, inokuhlala kuze kube yilapho Imizuzu ye-120.
Uma unebhethri ephansi, izobuyela ngokuzenzakalelayo lapho isisekelo sokuvuselela.
Um i-robot vacuum cleaner kuyamukeleka futhi ngentengo futhi inengqondo.
Amandla okuphumelela: 400pa
Vumela Ukuhlanza Isisindo: 3 KG
Ubukhulu: 34 cm x 34 cm x 8 cm
Umsindo: 68 DB
I-ILIFE A4S I-Aspirator Robot
Amandla okuphumelela: 7.5
Esinye isipho esikhulu emakethe ye-Robot Vacuum Cleaners, naphezu kokuba nomkhiqizo ofanayo nanjengaphambili, lena inguqulo ethuthukisiwe.
Inenani elengeziwe elengeziwe kune- ILIFE V5 , enye yezingqinamba eziyinhloko yi-suction yayo enamandla, i-1000pa.
Ifakwe inzwa yokulwa nokushayisana okulindele ukunyakaza okumelene nezithiyo.
Uma ukhokhiswa ngokugcwele ungahlanza indawo I-180-200 cm2.
Kuwusizo kakhulu kulabo abanezindawo ezinkulu ezifana namakamelo namahhovisi.
Jula 5 ukuhlanza izindlela:
Ukuhlanzwa kwekamelo elincane.
Singakwazi ukulungisa le ILIFE A4S ukwenza ukuhlanza ezikhathini ezichazwe ngaphambilini.
Awudingi ukukhathazeka ngakho shintsha ibhethri, umshini wenza lokhu kuphela uma ukulayisha okuphansi kuya esiteshini sokushaja.
Njengomfowabo wayo i-ILIFE V5, ifika efakwe ngesihlungi HEPA, kulula ukuhlela, kuhlelwa ukushintsha isihlungi njalo ezinyangeni ze-6.
Okufakiwe kukhona a umyalo nge-display ye-LCD, udinga i-3 AAA amabhethri, ngakho-ke sinokufinyelela kuzilungiselelo ezisheshayo zokuhlanza u-vacuum.
Vumela Ukuhlanza Isisindo: 2,2 KG
Ubukhulu: 31 cm x 31 cm x 7,60 cm
Umsindo: Ngaphansi kwe-65 DB
I-SEEBEST D750 i-Aspirator Robot
Amandla okuphumelela: 6.6
Igama logama: 3.7
I-robot enhle yokuhlanza i-robot enezici ezithakazelisayo, i SEEBEST wakha le robot encane, kodwa yiziphi izici zayo eziyinhloko?
Siqala ngeyakho gyro , kuzokuvumela ukuba upheqa indlu yakho njengokungathi kuyinkinga, inqunyelwe kumamitha ayisigidi angu-120.
Amandla ayo okuthinta i-800pa, azovumela ukuhlanza okuhle, nakuba amandla okulwela angaphansi kwamanye amamodeli ILIFE noma kusuka ku-Xiaomi uqobo, lo owenza okuningi umsindo omncane , umsindo uphakathi kwe-55 DB.
Lokhu kuhlanzekile kwe-robot vacuum cleaner kuyinkimbinkimbi, okuzokuvumela uhlanze kanzima ukufinyelela ezindaweni, njengaphansi kwamatafula, amakhabhinethi nezinye ifenisha.
I-algorithm yakho yokuhlanza i-ZigZag, lokhu ukugwema ukuphindaphinda futhi ngaleyo ndlela ukwandise isikhala sokuhlanza.
Siyabonga kwabanye izinzwa , njenge-anti-falling kanye nezithiyo, i SEEBEST D750 ngeke iwele ezicupheni njengezitebhisi noma izindonga.
Kubuye futhi izindawo ezihlukahlukene , njengamaphepetshi, lokhu kuhlanza i-robot vacuum, kungayifinyelela lokhu ngokubonga ngamasondo ayo ahambisanayo.
Kuthiwani uma ufuna ukuhlunga phansi?
O SEEBEST D750 futhi ukumelana nokuhlanza phansi, unomthombo we-100 ml wamanzi.
Okokugcina, lo mshini wokuhlanza ohlakaniphile unebhethri ye-2.200 mAh, uyakwazi ukusebenza ngokuqhubekayo phakathi kwe-90 ne-120 min.
Futhi hhayi uma udinga ukukhathazeka ngakho ukuvuselela kabusha, i-robot encane ibuyela yedwa phansi ukuze ilayishe.
Amandla okuphumelela: 800pa
Ubukhulu: 38 cm x 33 cm x 8.70 cm
Umsindo: 55 DB
Ibhethri: 2.200 mAh
I-ILIFE V5 i-Aspirator Robot
Amandla okuphumelela: 5.5
Kucatshangwa i-vacuum cleaner smart okwezimali kakhulu ezimakethe (ezungeze i-100 euros).
Kulabo abangadingi ukucaciswa okukhulu, ungakhetha lokhu isixazululo esilula futhi sinembile.
Singathembela kumandla ayo wokuncelisa we-600pa, okwenza kube Excelente ukugcoba imfucumfucu encane nothuli.
Lo mshini omncane omncane ungabhekwa njenge-2 ku-1.
Ngoba ngaphezu kokuhlanza ungase futhi phansi kanye namaphakethe.
Isiqukathi esibekiwe sinalo umthamo wegrimu ye-280, ingasetshenziselwa ukugcwalisa ngamanzi / ukuhlanza, uma ukusebenzisa amanzi ngeke ukwazi ukusebenzisa imodi yokuphumula.
Ibhethri inekhono le-2.600 mAh eligcina amahora we-2, isikhathi sokuvuselela kwamabhethri singamahora we-6.
Isisekelo sokushaja sifakiwe, i-robot ibuyela kwisisekelo sokushaja yedwa lapho iphansi.
Iqukethe izindlela zokuhlanza ze-3:
Ukuhlanza ngokuzenzakalelayo: Uhlola imvelo ezungezile futhi uqala ukuhlanza ngokulandela i-algorithm ehleliwe.
Ukuhlanzwa kwe-Edge: Ukuhlanza kwe-Edge kuqala
Ukuhlanzwa kwe-Fixed Point: Kuhle uma ufuna nje ukuhlanza endaweni ethile.
Abantu abaningi bagxeka i-algorithm yokuhamba ngokungabi yinye yezikhwepha zalesi sifo se-robot.
Usuvele ufake ifolda HEPA kulula ukuthola kunoma yisiphi isitolo.
Kunconywa ukuhlanza izihlungi njalo ezinyangeni ze-6.
Amandla okuphumelela: 600pa
Vumela Ukuhlanza Isisindo: 4,3 KG
Ubukhulu: 46 cm x 40 cm x 15 cm
Isikhathi sokusebenza: imizuzu ye-120
I-JISIWEI I3 I-Aspirator Robot
Igama logama: 4.2
Lokhu kuhlanza i-robot encane yokuhlanza kuyokumangaza ngawe okuhlefuthi ngani?
Ngoba ngaphezu kokuhlanza kuzoba nomthwalo wemfanelo ukuphepha kusuka ekhaya lakho.
O UJISIWEI I3 inekhamera ye-1.0 MP ene-120, isekela ukutholakala kokuhamba, uma esinye isithiyo sishukumisela emkhakheni wokubuka kwayo, i-algorithm yokuthola iqala ukurekhoda.
As ukuqoshwa kungaba kuvidiyo, noma ngisho nasesithombeni sefomethi (JPG), i-ally enhle ngokuphepha.
Khona-ke ingadluliselwa nge Cloud , lapho ungafinyelela khona lolu lwazi nge WiFi , 3G, 4G futhi ungasebenzisa noma aplicação (android) ukulawula i-robot ukufinyelela lolu lwazi.
Ok! Ok! Pho kuthiwani ngokuhlanza?
Amandla akhe ukuncela uwela ngaphakathi kobubanzi Ngokwesilinganiso, nge dc amandla 800, uzibambela robot wezindlu usebenzisa imizila 7 ezincane ezihlukahlukene kuhlanganise nazo zonke izindlela wokuhlanza nokuhlanza futhi ekhuhla.
Inebhethri ye-2.200 mAh ezokuvumela ukuthi usebenze amahora we-2 ngokulandelana, uma kuthatha ukuyibuyisela esiteshini sayo sokushaja yedwa.
Unezinzwa ezihlukahlukene, ezifana nokulwa nokushayisana, ukulwa nokuwa, ekukwazi ukugcina ama-debris 600ml.
I-smaller, compact cleaner vacuum cleaner ephethe uhlelo lokuvikela oluhle oluzovikela ikhaya lakho.
Vumela Ukuhlanza Isisindo: 2,6 KG
Ubukhulu: 33 cm x 36 cm x 7 cm
Isiphetho - Abahlanzi Bokuhlanza I-Smart
Iminingi yale mishini ingaba nezindleko eziphezulu zokuthengwa, kodwa ngokutshala imali kulolu hlobo lwemishini kuzokuvumela ukuba ube nesikhathi esengeziwe seminye imisebenzi, ube nesikhathi esengeziwe somndeni wakho, izinto ozilibazisayo nabanye.
Qhubeka futhi uqale ukulondoloza isikhathi sakho esiyigugu ngezinto ozithandayo.
 Ama-Smartphone we-10 Amageyimu ongawathenga
 I-10 Best Smartphones Ukuthenga (Izindleko / ...
 I-10 best Torrents sites (Free)
 10 Amawebhusayithi Aphezulu Khipha amavidiyo we-YouTube ...
Izingozi ze-9 ze-Intanethi | Funda Indlela Yokuzivikela
I-copyright 2019 Khetha Okuphephile | Wonke Amalungelo Agodliwe | Mayelana nathi | Xhumana nathi | Inqubomgomo Yemfihlo